1I 1xbet.co xbet Torkia Live Betting Site
Tsy mandeha tsara ny Dota 2 – Statistika farany 4 ratsy indrindra amin'ny taona
Dota, iray amin'ireo lalao manana mpilalao be indrindra eran'izao tontolo izao 2, mandeha ra isanandro io.
Tiorkia no mpitia an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ary azo antoka fa ireo zavatra Dota 2 ireo dia tsy mandeha tsara mihitsy. Ny antontan'isan'ny mpilalao antonony isam-bolana an'ny mpilalao 2 izay isan'ireo mpilalao latsaka isan'andro 2014 Tsy dia ratsy izany hatramin'ny volana aprily.
2011Hatramin'ny nanombohany, ny lalao dia nahasarika sary miakatra amin'ny alàlan'ny fampandraisana anjara mpilalao marobe hatrany. 2015 nitahiry an'ity sary ity mandra-pahatongan'ny diabe. 2015 Ny lalao, izay nanomboka sitrana aorian'ny volana vitsivitsy nilatsaka tamin'ny 2003, dia nitohy niverina indray avy teo amin'izay nianjerany. 2016 Hatramin'ny Oktobra.
Kaody fihenam-bidy: 1x_107498
2016 Mihena ny statistikan'ny mpilalao isam-bolana amin'ny volana oktobra amin'ny lalao izay tsy azo intsony nanomboka tamin'io andro io. Ilay volana navelanay 780.000 ny lalao mifarana miaraka amin'ny mpilalao antonony dia tamin'ny volana aprily 2014 lasa teo(fampiroboroboana dia nisy statistika ratsy tahaka izany.
Ny antony sy ny antony nahatongavan'ilay lalao tamin'io fotoana io dia resaka te hahafanta-javatra.. Teôria maro no aroso manoloana izany.. Andao hodinihintsika miaraka ireo ny lojika indrindra amin'izy ireo..
1) Ny sehatra Esports dia sehatra manerantany ary tsy misy fampiasam-bola ho an'ny eo an-toerana
1.1) Ny sehatra Esports dia iraisam-pirenena
Araka ny fantatrao, ao amin'ny Dota 2, Ny rafitry ny ligy eo an-toerana toy ny League of Legends dia tsy manana rafitra fitantanana eo an-toerana izay sy. Izay mametraka mpilalao amin'ny hazakazaka fifaninanana manerantany. Na ireo mpilalao enina ambaratonga ambony aza dia tsy mahita kianja filalaovana mba hampisehoana na hanomezana fahafaham-po ny fahatsapana fifaninanana, satria mifaninana ny lalao dia azo antoka fa manerantany izany..
Andao hiara-manisa; Puppey, KuroKy, Izao Rehetra Izao, tahotra, Dendi, EE, Notail, Fly, Face-, Solo, s4 hafa izay ary. Henontsika ireo anarana ireo hatramin'ny 2011-2012.. Amin'ny lalao, Vitsy ny mpilalao sarimihetsika afaka mahatratra ny dingana manerantany. Tsia mazava ho azy. Azontsika atao ny manisa ny Fahagagana ho vaovao, andao isaina ho vaovao i Sumail ka amin'izay hitantsika 4. fa andao isaina ihany ny taona. Ambonin'izany dia manisa vitsivitsy hafa isika saingy mbola tsy afaka mahazo ampy ihany. Mitovy ny anarana hitantsika amin'ny fotoana rehetra, izay mampiseho fa tsy afaka mihatsara ny sehatra..
Noho ny tsy fisian'ny rafitry ny ligy eo an-toerana, na ny mpilalao enina ambony aza tsy afaka mahita fotoana hipetrahana sy hampivelatra ny ekipan'izy ireo dia azo antoka fa izany ny ambaratonga manaraka, satria tsy afaka mahazo karama amin'ity lalao ity izy ireo, ka noho izany dia tsy maintsy misafidy lalao hafa izy ireo ho an'ny tanjon'ny asa na hitodika any amin'ny asa ivelan'ny lalao. izy nipetraka tao.
Izany no dingana omentsika ohatra avy any Torkia na ny seho mahaliana an'ireo mpankafy ny ekipa eo an-toerana dia tsy afaka mahita ny Dota'nın esp very mpilalao isan'andro. Io dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fientanam-pon'ny Dota ao amin'ny firenena sy ny fahafantarana ny lalao ao amin'ny firenena.. Rehefa atambatra ny toe-javatra toy izany dia tsy azo ihodivirana ny fihenan'ny isan'ny mpilalao..
1.2) Tsy misy fampiasam-bola eo an-toerana.
Notanisainay etsy ambony ihany koa io, Rehefa tsy misy fampiasam-bola eo an-toerana, ny ekipa sy ny mpilalao ao an-toerana dia tsy afaka miseho mora foana amin'ny sehatra lehibe. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fanilihana mpilalao vaovao avy ao amin'io firenena io.. Ankoatr'io antony io;
Rehefa tsy misy rafitra ligy eo an-toerana sy andrim-panjakana hanao asa fitantanan-toerana eo an-toerana, Tsy misy asa dokam-barotra eo an-toerana, ny lalao dia izay ary tsy afaka mahatratra mpilalao vaovao. Raha heverina fa ny League of Legends dia manao doka avy amin'ny YouTube mankany amin'ny doka ary mandrindra fifaninanana na dia any amin'ireo fivarotana kafe eo an-toerana aza dia tsy fahampiana lehibe izany.. Vokatr'ireny tsy fahampiana ireny dia tsy misy mpilalao vaovao tonga amin'ilay lalao, ny taloha izay ary ny statistika dia voakasik'izany mivantana rehefa miala amin'ny lalao izy ireo noho ny antony maro samihafa rehefa mandeha ny fotoana..
2) Ny fanavaozana ny vokatry ny lalao amin'ny izay sy ny haavony
2.1) Ny lamaody mahafinaritra ny lalao dia tsy mampiala voly intsony
DotA 2, indrindra amin'ny dingana voalohany “paosin-lalao” nanao ny lalao tsy mahafinaritra kokoa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny asany amin'ny endrika hatsarana.. Ity cheesy ity, Nanohy nahazo tombony ara-bola tamin'ireto lalao ireto izy, ary azo antoka fa mahihitra izany amin'ny valisoa nomeny teo am-pelatanana sy ny faran'ny lalao..
Manontany ny rehetra. Tsy ho tiantsika ve ny hahatongavany any amin'ny seretide?? Tsy tiantsika ho tonga Frostivious?? Tsy hilalao ve isika raha toa ka mitovy ny valisoa omen'ny lalao mitovy?? Milalao tokoa izahay. Tsy ho antsika ihany no nanehoany izany, fa tamin'ny forum maro, indrindra ny Reddit, izay mpilalao manerantany, fa tsy misy vokatra..
Raha tokony ho diretide dia tonga ny lalao fa azo antoka izany ary afaka mandray anjara ny tompony na 10 tsy maintsy milalao lalao ianao fa ny soatoavina dia eny an-tsena 50 denaria iray izay afaka mahazo fanomezana.
Ankoatry ny maody fifaninanana, ny fihenan'ny atiny toy izany izay hanasongadinana sy hampialana voly ny mpilalao dia iray amin'ireo antony lehibe amin'ny fihenan'ny isan'ny mpilalao..
2.2) Fanavaozana tsy misy haavo
Maheno aho “ny mahery fo roa vao haingana sy 4-5 entana tonga zava-baovao ity dia azo antoka fa ny fomba” izay teneninao. Marina ny momba ny maherifo, fa ny entana… Ahoana ny fahitantsika ny Meteor Hammer sy Aeon Disc amin'ny lalao ataonay? Ohatrinona no fahitantsika an'i Nullifier? Toy izany koa, ireo entana vaovao ireo, fanampiana izany fa tsy fanovana. Ny fanovana dia ny fanovana ny rafitra MMR ary soloina ny rafitra Badge..
Nisy fiovana avo lenta tamin'io ary azo antoka fa ny antontan'isan'ny mpilalao antonony amin'ny fotoana hahatongavan'ny Badge, satria nihevitra ny olona fa hisy zava-baovao ho avy rehefa tonga ny rafitry ny Badge, nefa avy eo hita fa tsy nisy niova ny rafitra.. Ny rafitra vaovao dia ny rafitra MMR naseho fotsiny. Tsy tian'ny olona koa io toe-javatra io..
Miaraka amin'ireo rehetra ireo, azontsika atao ny mahatakatra ny antony andehanan'ny lalao isan'andro.. Niezaka ny hamaha ny olan'ny Dota 2 araka izay tratranay izahay. Te handre ny eritreritrao koa izahay. Azonao atao ny maneho ny hevitrao amin'ny alàlan'ny lahatsoratray..
Ahoana no nahatonga an'i E-Spor??
Ny fahaterahan'ny E-Sports dia tena antitra noho ianao mety mieritreritra.. 70Miaraka amin'ny fampielezana marobe ny efitrano fanaovana arcade tamin'ny taona 1980 sy 1980, ny fiaraha-mientan'ny tanora amin'ny alàlan'ny filalaovana lalao sy ny fifaninanana miaraka no fototry ny e-Sports.. Solosaina manokana miditra an-trano, Miaraka amin'ny fanaparitahana ny internet sy ny fisian'ny lalao fifaninanana isan-karazany, ankehitriny dia mivoatra sy miely haingana ny e-Sports..
Androany, fifaninanana e-Fanatanjahantena e-Sports maro no voarindra.. Ireo fifaninanana ireo dia nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny fampivoarana ny hetsi-panatanjahan-tena sy ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena amin'ny alàlan'ny fanomezana tontolo iainana matihanina ho an'ireo mpilalao hifaninanany.. Ity no isan'ny fifaninanana ofisialy sy tsy miankina voalamina isan'andro ary mitombo ny fahalianana aseho., Mifanaraka amin'izany, natao ny lalana ho an'ny e-Athletes hanatanterahana izany amin'ny maha matihanina matihanina azy.. Ankehitriny ny fifaninanana e-Sports miaraka amina loka hatramin'ny dolara an-tapitrisany sy mpijery an'arivony maro any amin'ny kianja filalaovana, nivadika ho hetsika narahin'ny fandaharana mivantana an'arivony an'arivony tamin'ny internet.. Klioba e-fanatanjahantena an-jatony maro no natsangana teo ambanin'ny elo an'ny orinasa sy mpanohana isan-karazany miasa amin'ny sehatra E-Sports isan-karazany ary mampiofana tsy tapaka toy ny klioban'ny fanatanjahantena ireo klioba ireo., mifaninana amina ligy sy fifaninanana isan-karazany ary hamafiso ny mpiasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny famindrana rehefa ilaina.. Ho fanampin'izany, any amin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao dia nanomboka nahazo fahazoan-dàlana ho an'ny atleta izy ireo tamin'ny fanisana azy ireo ho toy ny e-Athletes.. Any Torkia 2014 dia niditra ho any amin'ny firenena fahazoan-dàlana hatramin'ny.
Inona no atao hoe Esports? Bora Koçyiğit nilaza tamin'i Fanatik!
Steve, iray amin'ireo mpamorona ny DOTA, an'ny Riot Games “Guinsoo” Ohatra iray amin'ny fototra izany ary ny DOTA izay nipoitra teo ambany fitarihan'i Feak.. Satria ny mahasamihafa izany dia amin'ny lalao amin'ny DOTA” ary “Runes” manana rafitra. Tsy toy ny DOTA, ny fandraisana anjara azontsika amin'ny fahaizan'ny maherifo ampiasaintsika amin'ny LOL dia azo ampiana ho an'ity.. Nandritra ny fotoana ela ny serivera iray misaraka an'i Torkia dia ity no lalao sy sampana iray any Torkia. Amin'ny alàlan'ny Lalao Riot eo amin'ny anjerimanontolo eto amintsika, tokony any Torkia, ary i Torkia dia mikarakara fifaninanana ofisialy isan-karazany manerana, Ireo hetsika ireo dia heverina ho hetsika e-Fanatanjahantena lehibe indrindra eto amin'ny firenentsika.. Galatasaray, Beşiktaş sy Fenerbahçe koa dia manana ekipa.
DotA 2 ahoana ny fomba filalaovana?
Fiarovana mifandraika amin'ny Ntaolo(DotA) nipoitra ho mod novokarina ho an'ny Warcraft III, lalao paikady, DOTA miaraka amin'ny fifanarahan'ny developer Icefrog miaraka amin'ny orinasa Valve 2 tsy miankina Warcraft III voalaza, napetraka ho lalao misaraka izay.
Ny lalao dia atao amin'ny endrika ekipa roa misy olona dimy mivory izay. Amin'ny fanombohan'ny lalao dia mahery fo ny mpilalao tsirairay(mahery fo) noeritreretin'ny. Avy eo azo antoka fa mpilalao miady amin'ny mahery fo hafa sy ny biby goavambe voafehin'ny solosaina noforonina ho azy ireo.. Amin'ny famonoana mahery fo hafa sy biby goavambe amin'ny lalao dia afaka mahazo vola poder sy isa fahaizana ianao, manatsara sy manatsara ny endrikao ary afaka mividy ny maherifonao amin'ny alàlan'ny volanao.. Ny tanjona lehibe amin'ny lalao dia ny hiarovana ny tranon'ny ekipa tsirairay eo an-joron'izy ireo sy ny fandravana ny trano lehibe eo an-joron'ny ekipa mifanohitra amin'izany.. Ny ekipa voalohany nanao an'io dia mandresy. Ny fifaninanana amateur / matihanina dia karakarain'ny andrim-panjakana samihafa eto amin'ny firenentsika.. (E-Bergi no nampiasaina)
Teo aloha: Counter-Fitokonana
Manaraka: League of legends
Tehirizo ny anarako, mailaka, ary tranokala ao amin'ity mpitety tranonkala ity amin'ny manaraka rehefa manome hevitra aho.
1fampidinana finday xbet
Mety diso ianao
| maridrefy avy amin'ny lohahevitra AF.